Ny Alhambra dia manokatra amin'ny besinimaro ny volana Janoary ny efitranon'i Carlos V | Vaovao momba ny dia
Maria | | Fialan-tsasatra, Granada
Sary | Junta de Andalucía
Tamin'ny faran'ny 2016 dia voafidy ho tanàna tsara indrindra any Espana i Granada tamin'ny fifaninanana nokarakaraina tao amin'ny tambajotra sosialy. Napetraka tamin'ny faritra maro izy io satria toeran-dehibe fizahan-tany misy fizahan-tany izay manome fahafaha-manao goavana amin'ny fomba fijery ara-kolontsaina, gastronomika ary fanatanjahantena.
Toy ny tandindon'i Paris ny Eiffel Tower, ny sariohatr'i Granada no Alhambra mahafinaritra. Trano fahagola mahatalanjona izay mahatonga ny doka ho an'izay mandinika azy. Amin'izany fomba izany, ny Alhambra dia iray amin'ireo toerana tokony hitsidihanao indray mandeha amin'ny fiainanao.
Nandritra ny taona lasa, ny Alhambra any Granada dia nanome fotoana isan-karazany mba hahafantarana amin'ny fomba miavaka ireo faritra ao amin'ny trano mimanda Nasrid izay tsy ao anatin'ny fitsidihana noho ny antony fitahirizana sy fikojakojana.
Nandritra ny taona 2017 dia nanokatra ho an'ny besinimaro ny Birao ny Alhambra sy ny Generalife of Granada ny Torre de la Cautiva, ny Huertas del Generalife, ny Torre de los Picos, ny Torre de la Pólvora na ny Puerta de los Siete Suelos ary Hanombohana ny fialan-tsasatra ataontsika amin'ny tongotra ankavanana, mandritra ny volana janoary 2018 dia azo tsidihina ny efitranon'i Emperora Charles V. Ahoana ny fomba hidirana amin'izy ireo ary amin'ny andro firy?
1 Manao ahoana ny efitranon'ny Emperora Charles V?
2 Fitsidihana ny Alhambra any Granada
3 Ora fitsidihana
4 Aiza no ahazoana ny tapakila hijerena ny Alhambra?
Manao ahoana ny efitranon'ny Emperora Charles V?
Sary | Birao mpitantana ny Alhambra sy Generalife
Taorian'ny nandresen'ny fanjakan'ny Granada dia nanao fitsabahana vitsivitsy tao amin'ilay trano ireo mpanjaka monja katolika mba hampifanarahana ny lapan'ny Silamo amin'ny fampiasana Kristiana vaovao. Taty aoriana, ny zafikeliny Carlos V dia nanapa-kevitra ny hanamboatra fanovana ary hanangana efitrano maromaro hipetrahana eto amin'ny fotoana fitsidihany ny Alhambra tamin'ny 1526.
Noho io antony io dia nisy zaridaina sasany teo anelanelan'ny lapan'i Comares sy ny lapan'ny liona, fantatra amin'ny anarana hoe El Prado, no nampiasaina hananganana efitrano izay namboarina tamin'ny alàlan'ny lalantsara ampifandraisin'ny atitany sy ny tokotany tsy ara-dalàna, noho izany nilaozana ireo mari-pankasitrahana tsy miankina manodidina ny tokotany.
Ny efitrano voalohany dia fantatra amin'ny anarana hoe Emperor's Office, izay miaro am-patana sy valindrihana miorina amin'ny tranokala nataon'i Pedro Machuca tamin'ny 1532. Manaraka izany dia hitantsika fa misy efitrano fandraisam-bahiny hidirana ao amin'ny efitranon'ny mpanjaka. Teo anelanelan'ny taona 1535 sy 1537 dia i Alejandro Mayner sy Julio Aquiles (akaikin'ny mpanakanto Rafael) no niandraikitra ny fandokoana ny rindrin'ireo efitrano ireo. Mampalahelo fa saika very tanteraka ireo sary hosodoko ireo noho ny firakofana plaster imbetsaka.
Ny efitranon'i Emperora Charles V dia fantatra ihany koa satria nandinika ny alina tao ilay mpanoratra amerikana malaza Washington Irving., mpanoratra ny "Cuentos de la Alhambra", manokana ao amin'ny "Salas de las Frutas" tamin'ny 1829. Androany misy takelaka marbra napetraka eo am-baravarana, napetraka tamin'ny 1914, izay mampatsiahy ny fandalovan'ilay mpanoratra namaky ny Alhambra any Granada.
Fitsidihana ny Alhambra any Granada
Granada dia fantatra eran'izao tontolo izao amin'ny Alhambra. Midika hoe mimanda mena ny anarany ary izy io dia iray amin'ireo tsangambato espaniola be mpitsidika indrindra satria ny manintona azy dia tsy ny haingon-trano anatiny tsara tarehy ihany fa ao koa ny trano iray izay mifangaro tanteraka amin'ny tontolo manodidina azy. Raha ny marina dia manintona mpizaha tany misy dikany izany ka natolotra ho an'ny Fahagagana Vaovao fito eran'izao tontolo izao.
Izy io dia natsangana teo anelanelan'ny taonjato faha-1870 sy faha-XNUMX tamin'ny andron'ny fanjakan'ny Nasrid, ho trano mimanda sy tanàna palatine, na dia tranon'ny mpanjaka kristianina aza izany mandra-panambarana azy ho tsangambato tamin'ny XNUMX.
Ny Alcazaba, ny Royal House, ny lapan'i Carlos V ary ny Patio de los Leones dia anisan'ny faritra malaza indrindra ao amin'ny Alhambra. Toy izany koa ireo zaridaina Generalife izay miorina eo amin'ny havoanan'i Cerro del Sol, ny zavatra tsara indrindra momba an'ireny zaridaina ireny dia ny fiarahan'ny hazavana, ny rano ary ny zava-maniry maniry.
Amin'ny volana Janoary, isaky ny talata, alarobia, alakamisy ary alahady dia hita miaraka amin'ny tapakila Alhambra General ny efitranon'i Emperora Carlos V izay mihidy matetika noho ny antony fitehirizana.
Aiza no ahazoana ny tapakila hijerena ny Alhambra?
Ny tapakila hitsidihana ny Alhambra any Granada dia azo vidiana amin'ny Internet, an-tariby, any amin'ny biraon'ny tapakilan'ilay tsangambato mihitsy na amin'ny alàlan'ny maso ivoho misahana ny fizahan-tany izay maso ivoho nahazo alàlana. Raha jerena ny fahamaroan'ny fitsidihany isan-taona dia tokony ho tsaroana fa ny tapakila dia tsy maintsy vidiana mialoha, eo anelanelan'ny iray andro sy telo volana, amin'ny daty voafidy fa tsy azo vidiana amin'ny andro iray ihany.
Ahoana ny hevitrao amin'ny fandraisana andraikitry ny Birao Mpiambina ny Alhambra sy Generalife ao Granada hahitana ireo toerana lavitra indrindra amin'ny trano mimanda Nasrid? Efa nitsidika ny iray ve ianao? Iza amin'ireo no tianao na tianao ho hita?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Granada » Ny Alhambra dia manokatra amin'ny besinimaro amin'ny volana Janoary ny efitranon'i Carlos V
Ny fiantraikan'ny politika Ryanair vaovao amintsika
Ryanair dia mandefa ny politikany momba ny entana vaovao mampiady hevitra